All Ebooks :: Malagasy :: Laikos (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyLaikos (E BOOK)
Laikos (E BOOK)
Ny dikan’ilay teny Grika hoe LAIKOS dia “Tsy fananana fahiza-manao”. Nampianatra antsika hatrany hatrany ny tantara fa zavatra lehibe maro no vitan’ ireo olona “tsy manana fahaiza-manao”. Mianara, amin’ ny alalan’ ity boky miavaka nosoratan’ I Dag Heward –Mills ity, ny zava-miseho rehefa tsy...
Ny dikan’ilay teny Grika hoe LAIKOS dia “Tsy fananana fahiza-manao”. Nampianatra antsika hatrany hatrany ny tantara fa zavatra lehibe maro no vitan’ ireo olona “tsy manana fahaiza-manao”. Mianara, amin’ ny alalan’ ity boky miavaka nosoratan’ I Dag Heward –Mills ity, ny zava-miseho rehefa tsy misy olon-tsotra miasa ao am-piangonana;ny fomba fizarana ny zioga miaraka amin’ ny olona laika sy ny antony tsy maintsy iadintsika hiarovana ny ministera laika.